RASMI: Kooxda AS Roma oo Monchi u magacowday Maareeyeheeda Isboortiga + Sawirro – Gool FM
(Roma) 24 Abriil 2017 – Kooxda AS Roma ayaa xaqiijisay inay maareeye isboorti u magacowdeen ninkii isla xilkaa u hayay Sevilla ee Monchi oo la galay qandaraas 5 sanadood ah oo mid 5-aad lagu dari karo, kaddib markii uu soo afjaray 17 sano oo uu la joogey kooxda reer Andalusia horraantii bishan Abriil.
“Anigoo ka mas’uul ah nafteeyda iyo AS Roma, waxaan qoyskeenna soo dhowaynayaa Monchi oo aan u rajaynayo jaallnimo guuleed iyo cutub xiise leh oo uu ka bilaabo naadidan.” ayuu yiri madaxwaynaha kooxda Roma ee James Pallotta.
Ninkan 48-jirka ah oo kusoo baxay da’yarta Sevilla ayaa kooxdaasi isagoo goolwale ah u saftay 85 kulan intii u dhaxaysay 1990 iyo 1999, balse wuxuu caan ku noqday 17 sano oo uu maareeye isboorti u ahaa kooxdaasi, xilligaas oo ay Sevilla hanatay 5 Europa League, oo ay 2 ahaayeen UEFA Cup, 2 Copa del Rey, hal European Super Cup iyo hal Supercopa Espana intii lagu jirey waayihii Monchi oo caan ku ahaa inuu soo iibsado laacibiin da’yar oo rakhiis ah oo uu deeto qaali kusii iibiyo.
Wuxuu isla maanta booqday xerada tababarka Roma isagoo durba ku raad jooga laacibiin dhowr ah oo da’yar…
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii El Clasico ee ay kooxda Barcelona ka badisay Real Madrid